Waa adag tahay in ay muujiyaan dareenkooda ku saabsan sirdoonka oo ka mid ah bani aadamka. Smarter iyo xariifnimo sida ay horumarka sayniska, taasi waa hubaal. Iyo sababta keliya oo ka mid ah kuwa Sweden, waxaan ku dul socday da'da 3D halka technology 3D maturer iyo maturer noqday. Waa hagaag, waxaan ay haatan u jiraan weli da'da hore ee 3D iyo waxaa jira waxyaabaha yar 3D bixisey. Tusaale ahaan, filimada 3D hadda si fiican u helaan badan oo dareenka dadka si ay u soo daawadaan laakiin daawadayaasha ayaa si ay u tagaan filimada si aad u daawato,, qaar ka mid ah waxaa laga heli karaa guriga marka aad leedahay qaar ka mid ah warbaahinta ciyaaryahan 3D iyo qalab 3D sida muraayadaha 3D. Waxaa laga cabsado in ay leeyihiin waayo-aragnimo 3D masrixiyada guriga dabcan haddii ay jiraan filimada 3D ku filan ama filim aad jeceshahay dhacay in ay version 3D. Laakiin waxa haddii aan? Maxaa dhacaya haddii aad filim doonayo weli waa mid ka mid 2D? Markaas sameeyo waxa ay noqon movie 3D!
Article Tani waa tallaabo hagitaan talaabo talaabo aad muujinaya sida si ay u abuuraan filimada 3D AVI la 2D video files si fudud oo dhaqso haddii aad leedahay a warbaahinta ciyaaryahan 3D aqbalay files 3D AVI inuu u ciyaaro. Si taas loo sameeyo sida video ah 2D in ay diinta ka 3D AVI, Video Converter Ultimate waa in uu noqdaa mid caawisa oo weyn oo ay shaqo diinta 3D awood badan bixiya fiican si degdeg ah xawaaraha diinta:
1. Hel files 2D galay 2D in ay Converter 3D AVI
Waxaad si toos ah jiidi karaan & jeedi 2D video caadiga ah ee qaab kasta oo u Converter 3D AVI ama dooro "Add Files" hoos "Beddelaan" in menu sare ee interface ugu weyn kaas oo awood kuu keeno oo dhan video files ee folder aad dooratay galay barnaamijka diinta.
2. Dooro 3D AVI sida qaab wax soo saarka aad
Si aad u hesho waayo-aragnimo u gaar ah 3D hafanayo, waxaad halkan u baahan tahay inaad doorato qaabka wax soo saarka si waafaqsan 3D media player. Tusaale ahaan, haddii aad hesho qaar ka mid ah qeybiso anaglyph files 3D AVI halka aad leedahay labo ka mid ah anaglyph koob red-cyan, ka dibna aad kala dooran kartaa , oo haddii aad leedahay qaar ka mid ah koob kale 3D, sida muraayadaha shutter LCD, ka dibna ka hor tagaan in la doorto .
3. Ku bilow si loogu badalo video in 3D AVI
Saxaafadda "Beddelaan" button ka dibna ka tago software, si inta kale ee 2D in ay diinta ka 3D AVI si toos ah. Marka diinta lagu sameeyo, markaas ka dib waxaad dajiyaan karaa files si aad ciyaaryahan oo waxaad tagtaa ka hor inaad ku raaxaysatid Raaxo 3D!
Hadda, waxaad aadi kartaa inay ciyaari video 3D sida aad rabto.
Video Converter Ultimate Waa xalka oo dhan-in-mid video ah oo caawinaya in la 2D iyo 3D video files qaban. Waxaad u abuuri karaan wax file 2D in files ee 3D MKV, MP4 3D, 3D wmv ama 3D AVI. Oo haddii aad doonayaa geliyaan faylasha aad bogga YouTube 3D wadaaga online, horena u dooran filaayo in YouTube si toos ah kaas oo lagu badbaadin lahaa mar aad. Waxaa intaa dheer, sixiddiisa video files waxaa lagu taageeray. Si kor loogu qaado aad waayo-aragnimo warbaahinta, u tag hage user ee Video Converter Ultimate badan info.
10 Su'aalaha aad doonayso inaad ogaato oo ku saabsan files M2TS
> Resource > Beddelaan > 3D AVI Converter: Si fudud Abuur 3D AVI Faylal ay la 2D Videos